Webpage to PDF ပြောင်းခြင်း — MYSTERY ZILLION
Webpage to PDF ပြောင်းခြင်း
November 2009 edited November 2009 in Sharing
Web site ကနေ PDF ကိုအလွယ်လေးနဲ့ ဘာဆော့ဖ်ဝဲမှမလိုဘဲ ပြောင်းလို့ရပါတယ်
www.webtopdfconvert.com မှာ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ site ရဲ့အမည်ကို ရေးပေးလိုက်
သူက pdf ကိုပြောင်းပေးလိမ့်မယ် ပြီးတော့ ဒေါင်းလော့ချလို်က်ပေါ့နော်
MZ ကိုသာပြောင်းမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်လောက်ကြာမယ်ထင်ပါ့:P
ကိုယောန... site မှားနေသလိုပဲ....... ပေးတဲ့ Link က ဖွင် ့မရဘူးဗျ.....
ကျွန်တော်ထင်တာ ဒီ Link နဲ ့တူတယ်.....
မြန်မာစာတွေကို မြင်ရမယ်မထင်ဘူးဗျ။ web2pdf ပြောင်းတဲ့အခါမှာ မြန်မာစာတွေအတွက် သီးသန့် မရေးထားပေးရင် မြန်မာစာတွေကို အတုံးလေးတွေပဲ ပြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ နောက်ပြီး ပေးလိုက်တဲ့ page ကိုပဲ ပြောင်းပေးနိုင်မယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ link က login ဝင်ရမယ်ဆိုရင် ပြပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အကောင်းဆုံးကတော့ pdf software တွေနဲ့ကိုယ့်စက်ထဲကနေ ပြောင်းတာပဲ ဒါပေမယ့် English လို site တွေအတွက်ကတော့ pdf export service အနေနဲ့ သုံးလို့ရသွားတာတော့ မိုက်တယ်။
ကိုကြီး စေတန်...... Mozilla တို. IE တို. မှာ file ----> print
>printer name မှုုာ ADOBE PDF လို ့ရွေးရင် .... web page ကို PDF ပြောင်း လို ့ရတယ်နော်.....
ဟီးဟီး ကျွန်တော်လည်း သိသလောက်၀င်ပြောကြည့်တာပါ.... :D
adobe pdf professional သွင်းထားမှ ပြောင်းလို့ရတာပါ။ Linux နဲ့ mac မှာက pdf ပြောင်းဖို့အတွက် built-in ပါပေမယ့် win မှာက မပါပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပဲဗျ ကျွန်တော်လဲ ဂျနယ်ထဲပါတာကိုတင်လိုက်တာပါ
ကျွန်တော် ဘလော့ကိုတော့ စမ်းပီးပီ
cyberbot wrote: »
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆော့၀်လေး သွင်းထားတယ် ..
web ကနေ pdf ပြောင်းချင်လည်းရတယ်
word ကနေ pdf ပြောင်းလည်းရတယ်
pagemaker ကနေ pdf ပြောင်းလည်း အဆင်ပြေတယ် ..
File - Print - PDF Creator - OK
ပြီးရင် save .. သိမ်းမယ့် နေရာလေး ရွေးပေးလိိုက်ယုံပဲ..